ကဗျာ | လွတ်လပ်လှိုင်းမဂ္ဂဇင်း | Page 5
မျက်ရည်ဝဲနေတဲ့ဟွန်းသံ -﻿ တိုးနှောင်မိုး
ဖေဖေရဲ့ ရှိုက်သံမှာကျွန်တော်ငိုနေတယ်ဆို ယုံမလား။ ကြွေးဟောင်းကိုမဆပ်နိုင်သေးဘဲကြွေးသစ်ပါ ဆက်တင်နေတဲ့ ...
ဖေဖေရဲ့ ရှိုက်သံမှာကျွန်တော်ငိုနေတယ်ဆို ယုံမလား။ ကြွေးဟောင်းကိုမဆပ်နိုင်သေးဘဲကြွေးသစ်ပါ ဆက်တင်နေတဲ့ ကျွန်တော်ဖေဖေ့အရိပ် မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းကကမ္ဘာ့အနက်ဆုံး ချောက်ထဲခုန်ချခဲ့။ ကျွန်တော့်စိတ်နဲ့ဖေဖေ့န ...
ခင်လွန်း ဘာမှမရှိတော့ဘူးမှမရှိတော့ဘူး-မင်းတို့မှာအာဏာရှိတယ်ငါတို့မှာ အိပ်စရာမရှိတော့ဘူးမင်းတို့မှာ နောက်လ ...
ခင်လွန်း ဘာမှမရှိတော့ဘူးမှမရှိတော့ဘူး-မင်းတို့မှာအာဏာရှိတယ်ငါတို့မှာ အိပ်စရာမရှိတော့ဘူးမင်းတို့မှာ နောက်လိုက်ဗိုလ်ပါတပ်ထုကြီးရှိတယ်ငါတို့မှာ ထင်းခွဲဖို့ဓားမတောင်မရှိတော့ဘူးငါတို့မှာ ထမင်းချက်စရာအိုးလဲ ...
သူငယ်ချင်းဓာတ်လိုက်သေဆုံးမှုကို မြင်တွေ့ခဲ့သော ကျောင်းသားနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း – မင်းမျိုးအောင်စံ
.အဲဒီနေ့ကကျူရှင်ကမုန့်စားဖို့ပြန်လွှတ်တာသားက အိမ်ကို လွယ်အိတ်ပြန်ယူပြီးတော့ ကျူရှင်ကိုပြန်ထားတာ။ ကျူရှင်ကေ ...
.အဲဒီနေ့ကကျူရှင်ကမုန့်စားဖို့ပြန်လွှတ်တာသားက အိမ်ကို လွယ်အိတ်ပြန်ယူပြီးတော့ ကျူရှင်ကိုပြန်ထားတာ။ ကျူရှင်ကနေပြီးတော့ မုန့်သွားစားတာ။ ချယ်ရီဥယျာဉ်နားရောက်ရောသူကကားလမ်းမ ရှုပ်နေတယ်။ငါ လမ်းဆင်းလျှောက်မယ်ဆို ...
အက်ကြောင်းရဲ့ လားရာ – တိုးနှောင်မိုး
.မုန်တိုင်းသတိပေးချက် ဝင်လာတယ်သတင်းထောက်တွေ အဖမ်းခံရတယ်ချေ မွေးနေ့ ဆိုလားဂျပန်က အသံက စစ်မဲ့ဇုံဆိုတော့မိုး ...
.မုန်တိုင်းသတိပေးချက် ဝင်လာတယ်သတင်းထောက်တွေ အဖမ်းခံရတယ်ချေ မွေးနေ့ ဆိုလားဂျပန်က အသံက စစ်မဲ့ဇုံဆိုတော့မိုးမလင်းခင်နိုးတဲ့သူတွေ ဒီနေ့ များသားကြက်သားအုပ်မက ငါးနာရီမထိုးခင် အိပ်တန်းဆင်း အစာရှာငါလည်း ဘာထူး ...
ရာသီစက်ဝန်း – မောင်ထိန်လင်း(မြို့သာ)
.ကိုယ့်ရာသီဥတုဟာ သူ့မျက်နှာပေါ် မူတည်နေလေရဲ့လက် လှုပ်လှုပ်လိုက်တိုင်းခြေ လှုပ်လှုပ်လိုက်တိုင်းပင်လယ်စောင့်ဘီလူ ...
.ကိုယ့်ရာသီဥတုဟာ သူ့မျက်နှာပေါ် မူတည်နေလေရဲ့လက် လှုပ်လှုပ်လိုက်တိုင်းခြေ လှုပ်လှုပ်လိုက်တိုင်းပင်လယ်စောင့်ဘီလူးကြီး အမျက်ထဲကရွက်လှေကလေး ဖြစ်သွားရတယ်သူ့ရာသီဥတုကတော့ ကိုယ့် ခယမှုပေါ် မူတည်နေလေရဲ့ခေါင်းလေး ငုံ့ ...
ကျွမ်းနေတဲ့ မီးသီးများ – ဖုန်းမောင်
.အရင်က အမှောင်ညများအတွက် တာဝန်ကျေ ထွန်းလင်းပေးခဲ့ပြီပဲ။ကျွမ်းနေတဲ့ မီးသီးတွေကို ကြည့်ပြီးအဖေလက်ထက်ကမို့အေ ...
.အရင်က အမှောင်ညများအတွက် တာဝန်ကျေ ထွန်းလင်းပေးခဲ့ပြီပဲ။ကျွမ်းနေတဲ့ မီးသီးတွေကို ကြည့်ပြီးအဖေလက်ထက်ကမို့အမေလက်ထက်ကမို့ မလဲဘူးအမှောင်ထဲနေမယ် ဆိုပြီး ခေါင်းမာ မနေပါနဲ့။ခေါင်မိုးက ယိုရင် ခေါင်ကို ပြင်ရမှာ ...
စစ် – မိုးသက်ငြိမ်ဦး
.ဘာအတွက်ရယ် ဘာကြောင့်ရယ်မသိရပဲအိပ်မက်တွေလှပနေတဲ့ မိသားစုအိမ်လေးထဲကမ္ဘာပျက်သံ ပွက်ပွက်ညံရာကမျက်နှာကို လာစင် ...
.ဘာအတွက်ရယ် ဘာကြောင့်ရယ်မသိရပဲအိပ်မက်တွေလှပနေတဲ့ မိသားစုအိမ်လေးထဲကမ္ဘာပျက်သံ ပွက်ပွက်ညံရာကမျက်နှာကို လာစင်တဲ့ သွေးစ သွေးနများ ….အိမ်ခေါင်မိုးဟာ ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်သွားတယ်နေ့လယ်က အတူကစားခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ ...
ငွေလမင်း (သို့မဟုတ်) သူရဲကောင်း ကဗျာဆရာ – မိုနေးသစ်
အဆုံးအစမဲ့ သစ်ရွက်တွေကြွေနေတယ် ကောင်းကင်ပြာဖို့ အဖြူရောင်ငှက်တွေ ပျံသန်းဖို့ သူ ပေးဆပ်ခဲ့ ငြိမ်းမြတဲ့ ကဗျ ...
အဆုံးအစမဲ့ သစ်ရွက်တွေကြွေနေတယ် ကောင်းကင်ပြာဖို့ အဖြူရောင်ငှက်တွေ ပျံသန်းဖို့ သူ ပေးဆပ်ခဲ့ ငြိမ်းမြတဲ့ ကဗျာ အေးချမ်းတဲ့ အကြည့်နဲ့ ရေးထိုးထားခဲ့ နှလုံးသားထဲ ဘယ်တော့မှမသေဆုံးမယ့် ငါတို့ရဲ့ ငွေလမင်း သူရဲေ ...
အကျအဆုံးများတဲ့ ရာသီ – မျိုးတေဇာမောင်
ကဗျာရေးတဲ့ လက်တွေဟာစောင်းပြီးလည်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို တည့်မသွားအောင် စောင့်ရှောင်နေတာဖြစ်တယ်။သွားပြီ လက်တစ်စံ ...
ကဗျာရေးတဲ့ လက်တွေဟာစောင်းပြီးလည်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို တည့်မသွားအောင် စောင့်ရှောင်နေတာဖြစ်တယ်။သွားပြီ လက်တစ်စုံဟာ...သွားပြန်ပြီ နောက်ထပ်လက်တစ်စုံ။ဗျို့ ကဗျာဆရာတွေဗျို့ ညီအစ်ကို ကဗျာဆရာတွေကမ္ဘာကြီးကို တည့်မသ ...
ဘာသာစကား – ဖိုးရွှေညီမှိုင်း
ညီလာခံကြီးမှာ ငှက်​ နဲ့ ငါး က ပုရွက်​ဆိတ်​​တွေကိစ္စ စကား​ပြောကြသတဲ့။ ခက်​တာပဲ ငှက်​ကလည်း ​ လေ ဘာသာစကားပဲ ...
ညီလာခံကြီးမှာ ငှက်​ နဲ့ ငါး က ပုရွက်​ဆိတ်​​တွေကိစ္စ စကား​ပြောကြသတဲ့။ ခက်​တာပဲ ငှက်​ကလည်း ​ လေ ဘာသာစကားပဲ တတ်​တယ်​ ငါးကလည်း ​ရေ ဘာသာစကားပဲ တတ်​တယ်​ တ​ကောင်​ရဲ့စကား တ​ကောင်​နားမလည်​။ နားမလည်​ပဲ သူတို့​ ...
အဲဒီတံတိုင်းရဲ့နောက်မှာ (၂) – နရီမင်း
.(၂)အဲဒီတံတိုင်းရဲ့နောက်မှာသူခိုးကြီးညရဲ့ ကျီးမနိုးပွဲတစ်ခုမှာလိုကံကြမ္မာကာလသားတွေရဲ့လက်ဆော့ထားမှုတွေကိုလည် ...
.(၂)အဲဒီတံတိုင်းရဲ့နောက်မှာသူခိုးကြီးညရဲ့ ကျီးမနိုးပွဲတစ်ခုမှာလိုကံကြမ္မာကာလသားတွေရဲ့လက်ဆော့ထားမှုတွေကိုလည်း ကြားသိရတယ်။ဥပမာဆိုပါတော့လူတွေအများကြီးပါတဲ့တိုင်းသိပြည်သိ လူသတ်မှုကြီးတစ်ခုမှာကားငှါးလို့ လိုက ...
စိတ်ဆာလေငယ် – အံ့ဘွယ်ဟိန်း
.အာရုံမရတဲ့အကြောင်း အာရုံထဲရောက်နေတယ်ခုဘဝကနေ နောက်တစ်ဘဝ လှမ်းတွေးကြည့်တော့ဘယ်လိုအသိုင်းအဝိုင်းမျိုးရဲ့ လ ...
.အာရုံမရတဲ့အကြောင်း အာရုံထဲရောက်နေတယ်ခုဘဝကနေ နောက်တစ်ဘဝ လှမ်းတွေးကြည့်တော့ဘယ်လိုအသိုင်းအဝိုင်းမျိုးရဲ့ လိင်စိတ်ထဲ ခုန်ကူးလိုက်ရမလဲသဲထဲလည်း ရေသွန်ကြည့်တယ်ရေထဲလည်း သဲသွန်ကြည့်တယ်အရသာဟာ အသာမရဘူး ။နာရီထဲ ...
ဒီပရက်ရှင် – ဧညိမ်းဝေ
.စိတ်ကျရောဂါကစိတ်ကြွဆေးတွေ သောက်ထားတဲ့အတိုင်းအားတက်စရာ မတွေ့တော့ဘယ်လိုအားကျရမယ်ဆိုတာပဲ တွေးရတယ်။တစ်ခလုတ် ...
.စိတ်ကျရောဂါကစိတ်ကြွဆေးတွေ သောက်ထားတဲ့အတိုင်းအားတက်စရာ မတွေ့တော့ဘယ်လိုအားကျရမယ်ဆိုတာပဲ တွေးရတယ်။တစ်ခလုတ် တစ်ခလုတ်နဲ့ကုန်ဈေးနှုန်းကို မြင်းလုပ်ပြီးလ ကမ္ဘာပေါ်ကို ဒုန်းစိုင်းကြည့်ရင် ကောင်းမလား။ငါနေထိုင် ...
အဲဒီ တံတိုင်းရဲ့နောက်မှာ (၁) – နရီမင်း
.(၁)အဲဒီတံတိုင်းရဲ့နောက်မှာနံစော်နေတဲ့ အခန်းတွေ ရှိတယ်။အခန်းတွေရဲ့နံရံတွေက ပေပွလို့။ရုပ်ပုံတချို့ စာသားတခ ...
.(၁)အဲဒီတံတိုင်းရဲ့နောက်မှာနံစော်နေတဲ့ အခန်းတွေ ရှိတယ်။အခန်းတွေရဲ့နံရံတွေက ပေပွလို့။ရုပ်ပုံတချို့ စာသားတချို့နဲ့ အညစ်​အ​ကြေးတချို့။နံရံတွေပေါ်တချို့က မပြည့်ဝတဲ့ လိင်ဆန္ဒကြောင့် ပေါက်ကွဲကြသလိုတချို့က အမှ ...
ကြယ်​​တွေနဲ့အတူ – လင်းပြည့်အိမ်
.မြို့ကိုဝင်​ဝင်​ချင်း ​အေးစက်​သိမ်​​မွေ့တဲ့ တမာရနံ့က ငါ့ဦး​ခေါင်းကိုစပြီးသိမ်းပိုက်​​​တော့တာပဲကား​ပေ ...
.မြို့ကိုဝင်​ဝင်​ချင်း ​အေးစက်​သိမ်​​မွေ့တဲ့ တမာရနံ့က ငါ့ဦး​ခေါင်းကိုစပြီးသိမ်းပိုက်​​​တော့တာပဲကား​ပေါ်ကအဆင်း နှင်း​တွေက ငါ့ကိုယ်​​ပေါ် က​သောက​မျောတွယ်​ကပ်​လို့ ​ဆောင်းရဲ့သီချင်းကိုဖွင့်​ပြကြိုဆ ...